Myanmar Leaders – Page2– Myanmar Business Helper
March 20, 2017 November 28, 2018 denieldemon
ပျော်ပျော် မပျော်ပျော်ရှေ့ဆက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လား။ ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးပဲဖြစ်ပါစေ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတတ်တတ်ကြွကြွလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းထဲမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ စိန်ခေါ်မှုတွေသာမကစိတ်ပျက်စရာပျင်းရိငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ နေ့ရက်တွေကိုကြုံတွေ့ရလာမှာပါ။လုပ်ငန်းခွင်မှာအားတင်းရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ ဒီနည်းလမ်း ၅ ချက်ကို ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ၁။ ကြိုတင်အစီအစဉ်ရေးဆွဲပါ။ တစ်နေ့တာအချိန်စာရင်းကိုကြိုတင်ရေးဆွဲထားခြင်းအားဖြင့် အချိန်ကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်စားမလဲ ဘယ်အချိန်နားမလဲ ဘယ်အချိန်အလုပ်လုပ်မလဲ စသဖြင့်ရေးဆွဲထားနိုင်ပါတယ်။အချိန်စာရင်းကိုအထက်လူကြီးကသတ်မှတ်ပေးထားပါက တစ်နေ့တာလုပ်ကိုင်ရမယ့်အလုပ်များကိုခက်ခဲမှု၊ အချိန်ယူရမှုအလိုက် ပြန်စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ ၂။ အနားယူပါ။ နေ့စဉ်အချိန်စာရင်းထဲမှာ အနားယူချိန်တိုလေးတွေထည့်သွင်းရေးဆွဲဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ၁၀ မိနစ်တစ်ခါ သို့မဟုတ်မိနစ်၂၀ တစ်ခါ လုပ်လက်စအလုပ်ကနေ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်သာဖြစ်ဖြစ် မျက်လုံးမှိတ်အနားယူခြင်းရေသောက်ခြင်း ခနတဖြုတ်လမ်းလျှောက်ခြင်းစသောအလေ့အကျင့်တို့ကိုပြုလုပ်ပါ။ ၃။ အကောင်းဘက်ကတွေးပါ။ ဒီအလုပ်ကိုဘာကြောင့်စတင်လုပ်ကိုင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲ။အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်မှာလုပ်ကိုင်စရာလုပ်ငန်းတစ်ခုတော့ရှိနေပါသေးတယ်။ကိုယ့်လိုနေရာတစ်ခုရဖို့ ကြိုးစားနေရဆဲသူတွေထပ်တော့ ကိုယ်ကအများကြီးရှေ့ရောက်နေပါသေးတယ်။ ၄။ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင်နေပါ။ ဒီနည်းလမ်းကတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတွေအတွက်ပိုသင့်တော်ပါတယ်။အလုပ်စားပွဲနေရာပြောင်းခြင်း၊ ကော်ဖီဆိုင် ၊ စာကြည့်တိုက်၊ ပန်းခြံတို့ကိုလဲ ကိုယ့်ရဲ့ရုံးခန်းအဖြစ်အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ၅။ အနာဂတ်ကိုပုံဖော်စိတ်ကူးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ဟာ ဒီလုပ်ငန်းမဟုတ်သေးရင်တောင် စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လက်ရှိအလုပ်ကို
မနက်အိပ်ရာထတိုင်းမှာ Apple ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Steve Jobs လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အလုပ်တစ်ခုရှိပါတယ်။။ မနက်အိပ်ရာနိုးတာနဲ့ မှန်ရှေ့မှာမတ်တပ်ရပ်၊ မှန်ထဲက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြည့်ပြီး “အကယ်၍ ဒီနေ့သာ ငါအသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီနေ့ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို ငါလုပ်ချင်ရဲ့လား” ဆိုတဲ့ မေးခွန်း မေးပါသတဲ့။ ကျွန်တေ်ာတို့လဲ ဒီအလေ့အကျင့်ကို လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးလိုက်လို့ No ဆိုတဲ့အဖြေထွက်လာရင်တော့ ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်တန်ပြီ။ ကျွန်တေ်ာတို့ နေ့စဉ် ရုံးသွားတက်ရတယ်၊ အလုပ်လုပ်ရတယ်။ ဒီအလုပ်ဟာ ကိုယ်တကယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ဟုတ်ရဲ့လား? အကယ်၍ ဒီနေ့ပြီးလို့ ကိုယ် သေရတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပြီးသေသွားမှာလား? မပြောင်းတော့ဘူးလား။ နှလုံးသားက ပြောတဲ့စကားကို နားထောင်ရင် အောင်မြင်မှုက အနောက်က လိုက်လာပါလိမ့်မယ်။